ISIBONELO incwadi reference for the engaqaliwe
Eminyakeni yamuva, isiko Western izincwadi zokutusa esiye sathatha indawo evamile ukuba impendulo. Izinkampani eziningi kule iinsebenzi yayo inzalo, uma izincwadi zokutusa ezivela nabaqashi bakho baphambilini. Ngokuvamile umphathi HR ukholelwa ukuthi ngokubuza ozobhapathizwa nigqoke isandla incwadi inkampani - isampula ukuze ibuyekezwe. Futhi ngisho noma imibhalo efana ziyadingeka lapho sifuna umsebenzi ohloniphekile, kufanele ufunde ubuncane ezincwadini imithetho sokuhlanganiswa kwazo.
izincomo Isibopho kukhona izakhi ezibalulekile inkampani ezinhle okubhala, isitembu nekusayina unompempe, usuku, futhi kuhle oyifunayo inombolo naphumayo. Ukwenza izincomo ngokuhambisana nemithetho kokubhaliswa ibhizinisi ukuxhumana. ubude umbhalo kumele singeqi 180-200 amazwi.
Ngokusho umkhuba esungulwe, inhloko yenhlangano - umuntu oqashwe, futhi akuyona ukwenza izincomo. Ngakho-ke, kungase okusemandleni ukulungiselela incwadi isampula izincomo ngokwami, futhi kakade nge umbhalo ukulungele isicelo ukwamukelwa kanye nesiginesha yebhukwana. Ucele ngemvume ngesiphakamiso ezihamba phambili kusukela abaphathi bakhe ngokushesha, kahle ukuhlola izimfanelo zakho nobuthakathaka. Ngempela, kwaba njalo endabeni ka ukuhlola kuyoba esingesihle kakhulu, uma kuvela ukuthi umuntu ezincoma, futhi wasayina incwadi Akazi nakwazi ukuthi ukhona.
ISIBONELO inkomba incwadi - Inketho 1
Sidorov Petr Venediktovich yamukelwa inkampani yethu ngumlawuli uhlelo. Wasidalula ihlelwe umsebenzi inethiwekhi yendawo inkampani, akazange avumele Ukuphumula eside imishini yehhovisi, akhethiwe software eliphezulu zekhompyutha. Umsebenzi othintekayo imiphumela umsebenzi wayo, ubonisa isimo sengqondo sina emsebenzini, ukusebenza ngokwethembeka okuhle, kungakhathaliseki isikhathi sabo siqu. Kufanele kuqashelwe ukuthi ulwazi kanye namakhono abasebenzi uzobopha ndawonye amahhovisi disparate ngaphambi kwalokho, ngenxa okuyinto ihlelwe exchange okusheshayo kolwazi. Ngikholwa ukuthi ngeke ukuzibonakalisa ku uchwepheshe efanayo abanekhono zisesimweni esifanayo kwenye inkampani.
ISIBONELO inkomba incwadi - inketho 2
Isincomo unikezwa uPetrenko Tatyana Petrovna. Isisebenzi eziphawulwe ngenhla okunzima wasebenza njengoba umklami uMnyango ukukhangisa kwenhlangano. It umise ngokwaso njengoba umuntu creative futhi umhleli onekhono. Ngesikhathi isinyathelo Tatiana futhi iqhaza layo ngqo, umkhankaso ukukhangisa kwethu benza okungaphezu kwalokho emkhakheni. Phakathi neminyaka emibili yokuboshwa umsebenzi walo, inhlangano usezuze abalingani ezintsha, ivolumu yokuthengisa kunyuke ngo-15%, kulokho uyaqiniseka ukuthi credit wakhe oqondile. ngokukhethekile kufanele kube ikhono umsebenzi ukuze uthole engavamile yekusombulula inkinga, lokusungula, isifiso ukufeza imiphumela.
ISIBONELO inkomba incwadi - inketho 3
Ngiyaqinisekisa ukuthi uMnu Ovechko AN, ozalwa ngoMeyi 2 1978, esikhathini kusuka 15 Juni 2010 ngo-May 15, 2012 wasebenza njengoba Comptroller futhi uMcwaningi Mabhuku enkampanini yethu. UMnu Ovechko iqhaza kule nqubo ye ukulawula yokuthengisa umkhiqizo omusha eliseMpumalanga Ekude. Ngenxa amakhono yenhlangano, emakhonweni kanye nekhono ukwakha ukubambisana, yena ngesikhathi esifushane kahle izici kwezobuchwepheshe umkhiqizo bagqugquzela futhi, naphezu kwezimo ezinzima alo, bakwazi ukufika ukugcwaliseka kwazo zonke izinkomba. imikhiqizo akhawunti qualitative ehola nezitolo ezinkulu eMpumalanga Ekude nge iqhaza lakhe ngqo wasiza ukwakha amaphuzu ayinhloko ka-marketing isu esizayo. Ukuphathwa sibonga inkampani uMnu Ovechko ngokubambisana yimpumelelo. Uma okuqukethwe ulwazi le ncwadi ngeke kubonakale enganele, sikulungele ukuphendula imibuzo yakho enemininingwane.
Njalo futhi ezimweni lapho incwadi zokutusa liyadingeka umfundi. ngesincomo okunjalo kungaba wusizo ukuqeqeshwa noma iziqu for umsebenzi olwengeziwe. Okushiwo yilo le ncwadi? It is eyenziwe imithetho jikelele, umehluko kuphela wukuthi umphathi wakho noma ikhanda maqondana lizichaza kanjalo izimo ekufundeni futhi ngesisekelo salokhu kuphetha ukuxhumana professional. Enkabeni yalo, lokhu kuncoma okusikhumbuza izici evamile, kafushane ngaphezulu kuphela futhi ngaphezulu zefomu.
ISIBONELO incwadi inkomba isitshudeni
Student Ogly S. P. iziqu uVladimir Law Isikhungo Russian Ministry Interior njengoba ummeli-ummeli e-2012. Ngesikhathi kocwaningo lubonise ukuthi yena njengoba umfundi abanekhono neziqotho ofuna ulwazi kanye neziqu. It has a ukuhlolwa omuhle izifundo ezibalulekile. Umzimba umfundi futhi phakathi othisha ukuba sidlule siye sabonisa indoda nobudlelwano futhi ehloniphekile. Ngokuphindaphindiwe wahlanganyela izandla-on ukuqeqeshwa izenzakalo, lapho wabonisa njengoba ukusebenza namakhono yenhlangano, ezimele amakhono okwenza izinqumo. I batusa Ogly S. P. njengoba intern e PKU TSGIZHBO FSIN Russia.
Vice-Umphathi uMnyango Law, Doctor Yomthetho, uProfesa Pyshkin AV (uphawu lwenombolo)
Inkontileka Public - yencazelo nemibandela yeziboshwa
Kuyini ngesisekelo nokuklanywa ngokomzimba-womhlaba. nokuklanywa Geographical: injongo, izindlela kanye nezimiso
Amaqiniso ethakazelisayo itiye, umlando imvelaphi, izakhiwo ewusizo